WordBrain အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် APK（84.2MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် WordBrain - Free classic word puzzle game
သန်းပေါင်း 40 ကျော်ဟူသောစကားလုံးပါရမီရှင်များသည်စကားလုံးများရှာဖွေခြင်းနှင့်ယုတ္တိဗေဒစွမ်းရည်များကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် WordBrain ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ပဟေ les ိများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်ထောင်ပေါင်းများစွာသောစိန်ခေါ်မှုရှိသောစကားလုံးများမှတစ်ဆင့်တိုးတက်လာသောစကားလုံးများကိုရှာဖွေရန်သင်၏ယုတ္တိဗေဒကိုသုံးပါ။
ပထမစကားလုံးပဟေ fi ိစကားလုံးကိုထူးခြားတဲ့ WordBrain စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံကိုလွယ်ကူစေတယ်, စကားလုံးပဟေ uzzlet ကိုသင်ချိတ်ဆက်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်အခြားစကားလုံးဂိမ်းသည်အတူတူပင်ခံစားရမည်။
သင်၏ပဟေ setving ားသည်မှန်ကန်သောနိုင်ရန်အတွက်စကားလုံးများကိုရှာဖွေရန်အတွက်ထိပ်တန်းပုံစံဖြင့်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည် အဆင့်ဆင့်။ အဆင့်တွင်ဝှက်ထားသောအခြားစကားလုံးများကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်သင်အပိုအချက်များဂိုးသွင်းနိုင်ပါသလား။
WordBrain သည်ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ BR> သင်၏ WordBrain ပဟေ game ိဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုဤနေရာတွင်စတင်သည်။ WordBrain mascot သည်သင့်အားမည်သို့ကစားရမည်ကိုပြသခြင်းကိုပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းပြုလုပ်နိုင်သည့်စကားလုံးပဟေ int ိညာဉ်များနှင့်စတင်ပါ။ စကားလုံးများကိုအဆင့်ဆင့်တွင်ဝှက်ထားလျက်ရှိသည်။ ပဟေ les ိများကိုသင်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီးပဟေ fi ိကိုဖြေရှင်းရန်မှန်ကန်သောအစီအစဉ်ဖြင့်စကားလုံးများကိုရှာနိုင်ပါသလား။ သင်ယုတ္တိဗေဒကို အသုံးပြု. သင်၏ ဦး နှောက်အရွယ်အစားရမှတ်ကိုတိုးမြှင့်ရန်သင်၏ ဦး နှောက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသလား။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော WordBrain အဆင့်များလည်းဖြေရှင်းရန်ရှိသည်။ Word အသစ်တစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေပြီးစကားလုံးအသစ်တစ်ခုကိုဖြေရှင်းရန်နှင့် WordBrain ပဟေ colle ိကိုဖြေရှင်းရန်သင့် ဦး နှောက်ကိုကျန်းမာစေရန်သင့် ဦး နှောက်ကိုလေ့ကျင့်ပေးသည်။
WordBrain သည်စကားလုံးများကိုပဟေ puzzle ဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုပုံမှန်ဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူလတ်ဆတ်သောစိန်ခေါ်မှုများကိုသင်ကအခြားပဟေ les ိများ၌သုံးနိုင်သည်။ ထိုနေ့၏ puzzle? မနက်ဖြန်တစ်နေ့တာ၏စကားလုံးကိုသင်ဖြေရှင်းနိုင်ပြီးသင်၏ Streak ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသလား။ WordBrain သည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောပဟေ les ိများများနှင့်စိန်ခေါ်မှုများကို0မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသောပဟေ les ိများများပို့ပေးကြောင်းထောင်ချီသော WordBrain ကစားသမားများရှိသည်။
အရိပ်အမြွက်ပြောကြားသည်။ WordBrain ပဟေ coll ိသုတေသနအားလုံးသည်အရိပ်အမြွက်များကိုမသုံးဘဲဖြေရှင်းနိုင်သည်။ သို့သော်သင်ပိုမိုခက်ခဲသောပဟေ les ိများများအားအကူအညီအချို့ကိုသင်လိုချင်လိမ့်မည်။ သင်ပဟေ for ိကိုဖြေရှင်းရန်စကားလုံး၏ပထမစာလုံးကိုသာလိုအပ်သည်။
သင်၏ကိုယ်ပိုင် Word Puzzle ကို ဖန်တီး. သင်၏စကားလုံးဂိမ်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကိုပြ သ. သင်၏သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပါ။ သင့်ရဲ့ပဟေ fi ိကိုဖြေရှင်းနိုင်မလား? သူတို့ကသူတို့ဖြေရှင်းနိုင်မလား။
အထူးရာသီအလိုက်ကြွေပြားများသည်သင်၏စကားလုံးဂိမ်းများကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုခြင်းဟုဆိုလိုသည်။ WordBrain ကိုနှစ်သက်ပါသလား ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ရှိ Facebook တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ပင်သို့မဟုတ် Twitter တွင်ကျွန်ုပ်တို့နောက်သို့လိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားပျော်စရာများ, .Twitter.com / Wordbraingame
စကားလုံးလွှမ်းမိုးမှုသို့မဟုတ် WordBrain 2!
WordBrain ကို Mag Interbrain မှမေတ္တာဖြင့်ဖန်တီးထားပြီး, WWW.MGOGINGINGSCORD တွင် MAG
WWW.maginteractive.com တွင် ကြိမ်!
WordBrain Game သည်ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ In-app ဝယ်ယူမှုများကိုနောက်ထပ်အကြောင်းအရာနှင့် In-Game Corrency အတွက်ရရှိနိုင်သည်။
ဘာအသစ်လဲ WordBrain - Free classic word puzzle game 1.43.5
Puzzle Games for Adults & Kids Free
TOP5FUN FREE WORD GAMES OF 2021 YOU CAN PLAY ON PC | GAMES.LOL
word brain game video